City of Vantaa - 20201202_somali_perusopetus
Waxaan ku dadaaleynaa sidii aan ku joojin lahayn faafista feyruska korona ee iskuulka dhexdiisa
Kooxda iskuduwidda arrimaha korona ee caasimadda iyo hareeraheeda waxaa ay go’aan ku gaareen 26.11.2020, xadeymo iyo talosoojeedinno cusub. Si loo awoodo hoos u dhigidda ama yareynta faafista feyruska korona, waa in dadku ay yareeyaan isu imaatinka ama kulamada dhexdooda ah, oo ay waqtiyo dhif ah kulmaan. Kooxda iskuduwidda arrimaha korona waxaa ay tusaale ahaan soo jeedinayaan, in wadaxiriirka iyo isuimaanshaha munaasabadaha gaarka ah ay noqdaan kuwo ku eg ama lagu xadeeyay oo kaliya dadka guriga wada deggan, iyo dadka ehelkooda ah ee iyaga sida aadka ah ugu dhow. Waxaad halkaan ka akhrisaa xadaymaha dheeraadka ah ee wararka lagu sheegay: PK-seudun koronakoordinaatioryhmä linjasi uusista rajoituksista ja suosituksista.
Iskuulka dhexdiisa waxaa la isku dayayaa in si wax-ku-ool ama miradhal ah loo joojiyo faafista cudurka safmarka ah ee feysruka korona. Ardayda dugsiyada dhexe iyo kuwa sare, iyo sidoo kale dhammaan shaqaalaha iskuullada waxaa loo soo jeediyay in ay iskuulka dhexdiisa ku qaataan afshareerka.
Waxyaabihii hore loo soo jeediyay ka sokow, waxaa kaloo dheeraad ah oo la go’aamiyay, illaa iyo 20.12 inaan:
Dalxiisyada gaagaaban ee waxbarashada aan la aadin.
Waxbarashada meel aan iskuulka ahayn (leirikoulu) lagu tago lama qabanqaabinaayo.
Xisaddii barashada dabaasha waa la joojiyay.
Xisadda isboortiga waxaa lagu qabanaayaa hoolalka isboortiga ee iskuulka, waxaa arrinkaas ka baxsan iskuullada aan lahayn hoolalka isboortiga.
Dhammaan munaasbadaha iskaa u qabsada ah ee la xiriira howlaha naadiyada iyo hiwaayadaha waa la joojiyay, si aanay carruurtu ugu dhafmin kooxahaas.
Iskuullada waxaa xiligii deyrta oo dhan ka jiray nidaam-maalmeed kooxaha ardayda ah la kala horreeysiinaayay, islmarkaana howlaha la qabanaayo ay ahaayeen kuwo la xiddiday, illaa iyo heerka ah in ardday kala koox ah aanay isku dhafmin. Warbixinta dheeraadka ah ee arrinkaas ku saabsan waxaad ka akhrisan kartaa warkaan: Lisätietoa näistä käytännöistä uutisesta: Syyslukukausi alkaa kaikissa Vantaan kaupungin peruskouluissa lähiopetuksena.
Ha imaan iskuulka adigoo xanuunsan
Waxaa aad muhiim u ah, inaadan iskuulka imaan, adigoo ay ku hayaan astaamaha la xiriira hawamareenka. Xitaa haddii astaamaha ku hayaa ay yihiin kuwo yar ama fudud sida hargabka, dhuun-xanuunka, qandhada, qufaca ama shubanka, waa inaad guriga joogtaa. Sidaas ayaan uga hortagi karnaa in dadka kale ay u nuglaadaan feyruska. Gaar ahaan waxaa xusid mudan in ay dhici karto, in dhallinyardu ay qabaan feyruska korona, iyagoo aan wax astaamaha cudurka ah lahayn.
Haddii aad isku aragto astaamaha cudurka, waa inaad aaddo baaritaanka. Baaritaanku waa mid ammaan leh, dhakhso ah, islamarkaana aadan wax kharash ah ku bixinaynin. Baaritaanka waxaad ka ballansan kartaa bogga internetka ee omaolo.fi ama bogga inetnetka ee loo yaqaan koronaboti-ga (waxaad u baahan tahay in aad ku gasho aqoonsiga bangiga), ama waxaad wici kartaa khadka koronaha ee adeegga telefoonka ee xarumaha caafimaadka oo ah: 09 839 -50 000.